Mawduucyada Sharaltada Mozenda waxaa loo tixgelinayaa inay noqoto mid ka mid ah qalabka ugu fiican ee kaydka xogta
Maqnaanshaha xogtu waa geedi socodka xog ururinta domain gaar ah si loogu abaabulo qaabab kala duwan sida XML, CSV, ama TSV. Nidaamkani wuxuu ka duwan yahay ka soo saaridda xogta sida soo saaridda waxaa badanaa lagu sameeyaa iyadoo ururinta xogta laga helo domiyo badan.
Dalabka xogta xoqista adeegyadu aad bay u sii kordhayaan sababtoo ah faa'iidooyin badan. Taasi waa sababta qalab badan loo sameeyay si loo helo wax macluumaad ah oo laga helo webka. Nasiib darro, qalabyada intooda badani ma ahan kuwo kufilan oo leh waxyaabo badan oo dhib ah. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira qalab leh sifooyin aad u sareeya, waana tan Mozenda.
Faa'iidooyinka xogta xoqista
Mozenda waxay ururin kartaa macluumaadka xiriirka ururada iyo shakhsiyaadka. Kaydinta macluumaadka xiriirka waxay lagama maarmaan u tahay ururada iibka iyo bixiyeyaasha adeegga suuq geynta oo dhan aduunka oo idil. Iyada oo la horumarinayo shabakadda shabakada tiknoolajiyada, waxay noqotay mid aad u sahlan oo loo raadiyo dadka iyo ururku inay ku siiyaan adeegyadaada iyo alaabooyinkaaga.
Si fudud loo helo macluumaad kasta oo xiriirka ah ayaa fududeeyay in la isku daro liisaska boostada, liiska emailka, iyo xitaa liiska telefoonnada. Marka lagu daro faa'iidada kor ku xusan, waxaa jira sababo kale oo lagu xoqdo macluumaadka si joogto ah:
1. Cilmi-baarista tartanka: Shirkadaha waxay soo saaraan xogta sababo kala duwan oo tartan ah. Tusaale ahaan, shirkadaha ayaa laga yaabaa inay rabaan inay ogaadaan qiimaha ay tartamayaashu u soo bandhigaan alaabta iyo adeegyada qaarkood.
2. Geotargeting iyo grouping: Macluumaadka waxaa loo xoqay si habboon u qoondeeynta. Waxay u saamaxdaa shirkadaha in ay u ololaan ololaha suuq-geynta suuqa oo sidaas awgeed waxay kordhiyaan wax-ku-oolnimada dadaalkooda suuq-geynta. Tusaale ahaan, shirkad isboorti ah oo ku taala Dayton, Ohio waa inay kaliya u dirtaa farriimo suuq ah dadka deggan Dayton. U dirista dadka reer Cincinnati ma fiicnaan doonaan maadaama aysan macquul ahayn in qofna uu u safri doono si aad u hesho adeega spa ah.
3. Ololaha suuq-geynta: Sida hore loogu soo sheegay, waxaad u baahan tahay inaad hesho macluumaadka si loo dhiso xog-ururin dad dhagaystayaal ah.
4. Abuurista wicitaanada: Tusaale ahaan, haddii shirkadu u baahan tahay adeegsiga qareenka, waa inay eegtaa wicitaanada qareenka si ay u helaan xiriirada qareennada qaarkood oo ku salaysan isla magaalada.
5. Qiimeynta Shakhsiyaadka iyo Ururada Ganacsiga: Marka la raadinayo ganacsade ganacsi ama adeeg bixiye, saarista xogta waxay ka caawisaa shirkadda inay qiimeeyaan la-hawlgalayaasheeda mustaqbalka. Haddii aad heli karto macluumaad ku saabsan shirkad ama shakhsi, markaa waxaad ku qiimeyn kartaa maqnaanshaha.
Mozenda software ayaa soo saari kara xogta aad u baahan tahay si joogto ah ama dalbasho. Waxaa loogu talagalay in dadka isticmaala ay bartaan xirfadaha xoqitaanka webka si aad u dhakhso badan. Mozenda wuxuu adeegsadaa farsameynta casriga ah ee tiknoolajiyada ah ee ka dhigaysa mid dadka isticmaala dhabta ah.
Faa'iidooyinka la isku kalsoon yahay ee isticmaalaya waa:
Waxay si sahlan u socon kartaa bogagga shabakada ee qoto dheer
) Mashruucan oo kale oo ku saabsan sida shabakada oo kale ah
Marka laga reebo inuu isticmaalayo dadka isticmaala, Mozenda waxaa taageeray taageero 24/7 oo tiknoolaji ah, si aad u ogaatid sida loo isticmaalo qalabka si sax ah. Fiidiyowga barashada gaaban waa:
Sida loo qaado qoraalka. Tani waxay qaadataa 43 ilbiriqsi
Sida loo xareeyo bogga xiga ee natiijooyinka. Waxay qaadataa daqiiqad iyo 58 ilbidhiqsi
Sida loo dejiyo barnaamijka si joogto ah u shaqeeya. Mudadaas waxay tahay daqiiqad iyo 8 ilbidhiqsi
Sida loo wadaago xogta laba goobood. Waxay qaadataa 1 daqiiqo iyo 16 ilbiriqsi
Dhammaystiraan, inkastoo Mozenda leedahay sifooyin badan, sababaha ugu muhiimsan ee aad u tijaabinayso waa awooda ay ku xoqeen bogagga internetka Source .